Atrikasa - Dongguan Walley Machinary Technology Co., Ltd.
Atrikasa momba ny milina CNC
Varavaran-tsarimihetsika milina fananganana milamina CNC novolavolaina tamin'ny Vozina, izay afaka mahafeno ny fahafahan'ny mpanjifa mitombo sy ny kalitaon'ny vokatra ilain'ny vokatra. Ny milina famaky 4-axe an'ny CNC ary ny milina 5-axis an'ny CNC dia mety amin'ny ampahany amin'ny milina sarotra, mampihena ny fametahana miverimberina ary miantoka ny kalitaon'ny vokatra; Amin'ny alàlan'ny fanodinana sarotra sy ny fikosoham-bary, dia azo atao ny manamboatra ampahany sarotra.
Atrikasa fanodinana latina CNC
Ny atrikasa fanodinana latina CNC dia mety amin'ny famokarana karazan-java-mandeha mazava tsara rehetra, toy ny faritra vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny ampahany mazava tsara momba ny firaka vita amin'ny alimina, ny ampahany mazava tsara momba ny firaka varahina; Ny milina latina CNC dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny milina amin'ny vokatra lehibe, ny milina mandeha ho azy dia mety kokoa amin'ny famokarana ampahany amin'ny tsato-kazo, toy ny faritra misy ny tsipika lava, ny famokarana visy.
Miaraka amin'ny atrikasa fanodinana milina marindrano marobe manomboka amin'ny 30T ka hatramin'ny 200T, afaka mahatratra ireo filan'ny machining marina isika toy ny fitohitohizana tsy tapaka, haingam-pandeha haingam-pandeha ary fametahana hydraulic, sns.
Atrikasa fanodinana Module Radiator
Ny fanodinana modely fanaparitahana hafanana no vokatra lehibe ananan'ny orinasa mandritra ny taona maro, ny fizotran'ny famokarana matotra, ny tsipika fivoriambe feno, ary ny fifehezana ny faritry ny mari-pana 10 amin'ny tsipika soldering refow mba hiantohana ny fahombiazan'ny modely milentika hafanana.
Betsaka ny karazana radiatera, ao anatin'izany ny radiatera andiam-pandehanan'ny rivotra ary ny taratra radiatera mandeha amin'ny rano. Ny vokatra lehibe dia misy taratra LED taratra, taratra CPU, taratra fiarovana, taratra elektronika, taratra inverter, sns.